कोइराला परिवारको नालिबेली
गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: Home
Written by Yatra Daily
Tuesday, 23 October 2012 16:53	Rate this item
Be the first to comment!	Print
किसानहरूले विसं २०३८ चैतमा विराटनगरमा आयोजना गरेको एउटा र्‍यालीको भोलिपल्ट बीपी कोइरालाले कार्यकर्तामाझ भनेछन्, “मेरो परविारको नयाँ पुस्ता पाँचतारे छ, त्यसले राजनीति गर्दैन ।” बीपीको भनाइभन्दा फरक उनीलगत्तैको पुस्ता अर्थात् छोराहरू कुनै न कुनै तरकिाले राजनीतिसँग जोडिए तर नाति पुस्ता राजनीतिको मैदानबाट धेरै टाढा, साँच्चैको तारे दुनियाँमा रमाइरहेको छनेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता गिरजिाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि उनको परविारले पनि आफ्ना मुखिया गुमाएको अवस्था छ यतिबेला । एकातिर नेपाली कांग्रेसमा उनको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने विवाद चलिरहेको छ भने अर्कातिर कोइराला परविारभित्रै पनि उनको बिँडो थाम्ने व्यक्ति चाहिएको छ । गिरजिाप्रसाद नै कोइराला परविारका त्यस्ता पात्र हुन्, जसले राजनीतिमा त्यस परविारको दोस्रो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्थे । प्रश्न उठेको छ, को होला त त्यस्तो पछिल्लो पुस्ताको सदस्य, जो कोइराला परविारको उत्तराधिकार थाम्न सकोस् ?
सुरु गरौँ, बीपी कोइरालाका सन्ततीबाट । उनका जेठा छोरा प्रकाश कांग्रेस राजनीतिबाट राजा ज्ञानेन्द्रको मन्त्री हुँदै अहिले आपmनै पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेसका अध्यक्ष छन् । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर प्रकाश त्यसको व्यावहारकि प्रयोगमा भने असफल देखिए । जबकि, उनी आफूलाई बीपीको असली उत्तराधिकारी र अनुयायी दाबी गर्छन् । ०४६ सालको परविर्तनविरोधी अभिव्यक्ति, ०६१ माघ १९ पछि शाही मन्त्री र ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विरोधले उनलाई नेपाली राजनीतिमा असान्दर्भिक बनाइसकेको छ ।
बीपीका माइला छोरा श्रीहर्ष कांग्रेसमै छन् तर उनको चर्चा बीपीपुत्रका रूपमा बढी, कांग्रेस राजनीतिज्ञका रूपमा कम छ । अर्थात्, उनी राजनीतिमा सक्रिय मानिँदैनन् । कान्छा सशांक ०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पूर्ण रूपमा कांग्रेस राजनीतिमा होमिएका छन् । तर, पार्टी, परविार र जनताले आशा गरे अनुसार प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन् । सशांक राम्रा नेत्र चिकित्सक हुन् । आँखा विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरे तर राजनीतिका औजार चलाउने कुशलतामा भने उनी पछाडि नै देखिन्छन् । कांग्रेसजनले उनमा बीपीको छाया देखे पनि सक्रिय राजनीतिबाट टाढा रहेको विश्लेषण गर्छन् । अहिले उनी कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य र नवलपरासी जिल्लाबाट निर्वाचित सभासद् हुन् । सशांककी पत्नी सुपात्रा विवाहअघि थाइल्यान्डकी नागरकि थिइन्, जो प्रख्यात स्त्रीरोग विशेषज्ञ पनि हुन् । बीपीकी एउटी छोरी छन् चेतना, जो अहिले अमेरकिामा बस्िछन् ।
बीपीका माइला भाइ केशवप्रसादका दुई छोरा छन्, निरञ्जन र शेखर । जेठा निरञ्जन राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् । ०४८ सालपछिको केही समय उनी काका गिरजिाप्रसादकै वरपिर िदेखिन्थे । तर, देशबाटै पलायन भए । धर्मपत्नी सन्तोषको विमान दुर्घटनामा निधन भएपछि उनी भारतीय औद्योगिक घरानाकी इला डालमियासँग विवाह गरेर नयाँदिल्लीमा बस्दै आएका छन् । केशवका कान्छा छोरा शेखरले चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । राम्रा फिजिसियन कहलाइने उनी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति पनि भएका थिए । लामो समयदेखि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय उनी सात दल-माओवादी १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रियाको जारी चरणसम्म काका गिरजिाप्रसादसँगै थिए । पूर्वाञ्चल र खासगरी विराटनगरलाई आधार बनाएर उनी राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । संविधानसभाको निर्वाचनमा हारेको क्षेत्रबाटै उपनिर्वाचन जितेर अहिले उनी सभासद् छन् ।
बीपीका साहिँला भाइ तारण्िाीका एक छोरा छन्, ज्योति । पञ्चायतकालमा कांग्रेस र त्यसका नेतालाई सहयोग पुर्‍याएकी तारण्िाीप्रसादकी पत्नी रोशा त यस दुनियाँमा छैनन्, उनका छोरा ज्योतिले पनि कांग्रेस छाडेको धेरै भइसक्यो । बीपी कोइरालाले जेलजर्नलमा रोशा र ज्योतिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गरेको योगदानको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । ०१७ पुस १ गतेदेखि ०२५ सालसम्म रोशा र ज्योतिले गरेको सहयोगकै कारण बीपीले जेलबाट निस्केपछि चाबहिलस्िथत उनीहरूको निवासलाई आफ्नो बासथलो बनाए । बीपीकै कारणले त्यो घर ०४२ सालसम्म कोइराला निवासका रूपमा चिनिन्थ्यो । ०४६ सालपछि पनि लामो समय कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय रहेका तिनै ज्योति अहिले कांग्रेसको राजनीतिबाट बाहिर छन् र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)सँग नजिक छन् । “कांग्रेसको राजनीतिमा अहिले म एनआरएन हुँ,” भन्छन्, “तर, जतिखेर पनि सक्रिय हुन सक्छु ।”
बीपीका कान्छा भाइ गिरजिाप्रसादका एक छोरा र एक छोरी छन् । कानुनी छोरा सुरेश राजनीतिसँग टाढाको नाता रहेको छापाखाना व्यवसाय गर्छन्, उनको राजनीतिसँग कुनै साइनो छैन । छोरी सुजाता कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसहित वर्तमान सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छिन् । उनले आफूलाई कोइराला परविारकै उत्तराधिकारीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छन् ।
कृष्णप्रसादकी पत्नी मोहनकुमारीतर्फका छोरा मातृकाप्रसाद खलककै सबैभन्दा जेठा सन्तान हुन् । उनको हाँगो पनि राजनीतिबाट अछुतो छैन । १ सय ४ वर्षपछि जनताको सन्तानका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर मातृकाले नै पाएका थिए । उनका जेठा छोरा विमलको मधुमेहका कारण निधन भइसकेको छ । विमल पूर्णकालीन राजनीतिमा त थिएनन् तर नेपाल शिक्षक संघमा आबद्ध भएर नेतृत्व तहसम्म पुगेका थिए । माइला कमल ०११ सालभन्दा अगाडिदेखि नै वामपन्थी राजनीतिमा संलग्न छन् । कमल नै कोइराला परविारका त्यस्ता एक मात्र सदस्य हुन्, जसले कांग्रेसइतरको राजनीति गरे । हाल दक्षिण कोरयिाका लागि नेपाली राजदूत कमललाई नेकपा एमालेभित्र सिद्धान्त र निष्ठाका लागि उदाहरणीय पात्र मानिन्छ । अहिले मातृकाप्रसादका सन्तान कमल मात्र राजनीतिमा छन् । कान्छा सञ्जय नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध थिए । दुर्घटनामा उनको निधन भयो ।
चौथो पुस्ताः राजनीतिबाट टाढा
मातृकाप्रसादका जेठा छोरा विमलका दुई सन्तान छन्, विकास र आशीष । सिभिल इन्जिनियरङि् पढेका विकास अहिले न्युजिल्यान्डमा छन् । उनले भारतबाट इन्जिनियरङि् गरेका हुन् । फोटोग्राफी व्यवसायमा लागेका आशीष नेपालमै छन् तर राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिबाट टाढा । विमलकी श्रीमती विद्या पनि श्रीमान्को निधनपछि जेठो छोरासँग न्युजिल्यान्डमै बस्दै आएकी छन् ।
माइला कमलका छोरा कञ्चन डाक्टर छन्, जो अमेरकिामा बस्छन् । स्नातकोत्तर गरेकी छोरी रीता उनीसँगै कोरयिामा छिन् । साहिँलो छोरा अजयले एमबीबीएस गरेका छन् । तर, बिरामीका कारण उनी अभ्यासमा लाग्न सकेनन् । अर्का छोरा विजय पनि राजनीतिबाहिरै छन् । दुर्घटनामा निधन भएका कान्छा सञ्जयका छोरा दिपंकर भर्खरै प्लस टू पढ्दैछन् ।
बीपी-पुत्र प्रकाशकी छोरी मनीषा बलिउडको रंगीन दुनियाँमा रमाएकी छन् । मनीषालाई कोइराला परविारको चौथो पुस्ताबाट राजनीतिमा आउन सक्ने अड्कल हुने गरेको छ । तर, उनी आफैँले भने त्यस्तो सम्भावनालाई नकार्दै आएकी छन् । मनीषाका भाइ सिद्धार्थ पनि बलिउडमै संघर्षरत छन् ।
बीपीका माइला छोरा श्रीहर्षका एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा श्रेयश बेलायतबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गर्दैछन् । छोरी आवन्ती दिल्लीबाट चिकित्साशास्त्रमै स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । सशांककी छोरी सुपि्रयाले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । र, उनले फेर िऔषधशास्त्रको अध्ययन सुरु गरेकी छन् ।
केशवप्रसादका जेठा छोरा निरञ्जनका दुई छोरा छन् । जेठा हिमांशुले भारतका उद्योगपति सुरन्िदर कपुरकी छोरी मन्दिरासँग विवाह गरेका छन् । हिमांशु अहिले टायर र अटोमोबाइल्सको व्यवसाय गरेर नयाँदिल्लीमै बस्छन् । उनका भाइ भास्करले नेपालमै पाण्डे परविारकी छोरी जुनामायासँग विवाह गरेका छन् । अमेरकिाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातक, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातकोत्तर र हाल चीनको पेकिङ् विश्वविद्यालयबाट चीनको परराष्ट्र मामिलामा विद्यावारििध गर्दैछन्, उनी । “कोइराला परविारमा यति धेरै शिक्षा हासिल गर्ने भास्कर पहिलो सदस्य हुन्,” तारण्िाी-पुत्र ज्योति भन्छन् ।
शेखर-पुत्री नेहा नयाँदिल्लीबाट स्नातकोत्तर गर्दै छन् । ज्योतिका दुई छोरी छन्, मेघा र पूजा । जेठी मेघा एमबीबीएस सकेर काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा एक वर्षको अभ्यासपछि एमडीको पढाइ सुरु गर्ने तयारीमा लागेकी छन् । कान्छी पूजा व्यवस्थापनमा स्नातक तह अन्तिम वर्षमा छिन् ।
गिरजिाप्रसादका छोरा सुरेशका दुई पुत्र छन्, परतिोष र अभिषेक । दुवै काठमाडौँमै छन् । परतिोषले भारतको जयपुरबाट इन्जिनियरङि्को पढाइ सकेका छन् । अभिषेक अर्थशास्त्रमा स्नातक हुन् । छोरी सुजाताका छोरा एन्डि्रयास जर्मनीमै बाबु नोवर्ट जोस्टसँग बस्दै आएका छन् । छोरी मेलानीको बंगलादेशी नागरकि रुवेल चौधरीसँग विवाह भएको छ । अर्थात्, कृष्णप्रसाद कोइरालापछिको चौथो पुस्ताका अधिकांश सदस्य नेपालबाहिर छन्, कोही अध्ययनमा त कोही पेसा र व्यवसायका लागि । श्रोत nepalkuwait.wordpress.com	Read 575 times	Tweet
Latest from Yatra Daily
एमाले मधेसबिरोधी भएको भन्दै केन्द्रिय सदस्य गीरी र चौहानद्धारा राजिनामा
स्कुल बस बाट चेपिएर बालिकाको मृत्यु
उधोगपति सरावगी फोरम नेपालको प्रदेश कोषाध्यक्षमा मनोनित
फोटोपत्रकारिता र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि फोटोपत्रकारको टोली बंगलादेशमा
अनुप तिवारीको नयाँ गीत “सानी नानी”
« भन्सार मूल्याङ्कनको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ -गणेशप्रसाद लाठ प्रबन्ध सञ्चालक, गणेश ट्रेडिङ सेण्टर	सिएनएन हिरो पुष्पाको जीवन संघर्ष »
भर्खरैको समाचार	एमाले मधेसबिरोधी भएको भन्दै...
स्कुल बस बाट चेपिएर...
उधोगपति सरावगी फोरम नेपालको...
फोटोपत्रकारिता र पर्यटन प्रवद्र्धनका...
बन्दुकको जवाफ अब मधेसी...
फोरमबाट वीरगंजको मेयरमा सरावगी...
सरकारले मधेसमा चुनाव गराए...
पुर्व वडा अध्यक्ष एंव...
ट्राफिक जनचेतना सम्बन्धी प्रभात...
ट्रकको ठक्करबाट एकको...
भारतीय रेल्वे राज्य मन्त्री...
एमाले पार्टीबाट मधेसीको मोहभंग...
टाटा सुमो पल्टँदा...
संशोधन पछी मात्र चुनाव...
कांग्रेस, एमाले, माओवादी बाट...
नर्सिङ दिवसमा नेशनल मेडिकल...